Kygo A11 / 800, iyo yepamberi yepamusoro odhiyo yekudzima [Ongororo] | Gadget nhau
Kygo A11 / 800, inonyanya kukanzurwa kukanzura odhiyo [Ongororo]
Isu tinoramba tichiongorora izvo zvigadzirwa zvaunoda kuziva. Isu tinoziva kuti isu tiri munguva yeChokwadi Wireless mahedhifoni, zvisinei, kuchine vashoma vashoma vashandisi mune iro ruzha mhando uye kuzvitonga kunowanda. Headband mahedhifoni achiripo kwazvo pamusika, Asi kuti vazvipatsanure ivo vanofanirwa kusarudza nyaradzo uye tekinoroji yepamusoro, uye ndizvo chaizvo zvazvakaita uye kana vachinyatso kukoshesa.
Kygo neayo A11 / 800, pamwe ruzha rwemberi rwekudzima mahedhifoni pamusika uye nemhando yepamusoro kurira, takaaongorora saka iwe unogona kuziva zvakadzama mashandiro avo.
1 Dhizaini uye zvigadzirwa: Minimalism uye imwe gakava
2 Runyararo rwakanyanya kudzimwa kwandakamboona
3 Iko kunyorera kuwedzerwa kukosha
4 Kuzvimiririra, mashandiro uye hunyanzvi hunhu
5 Chiitiko chevashandisi uye maonero emupepeti
Dhizaini uye zvigadzirwa: Minimalism uye imwe gakava
Chaizvoizvo iyo Kygo Hupenyu A11 / 800 akanaka mahedhifoni. Tine imwe ine polycarbonate base yakaunza gakava. Polycarbonate inogara yakasimba kupfuura painoratidzika, muchokwadi inowanzo kuumba pane kutyora, saka ivimbiso yekusimba. Nekudaro, ine kushomeka kwekukwirana, uye iyo plastiki inonzwa mune imwe mutengo nharembozha inoisa imwe mhando yemushandisi kumashure. Ichokwadi kuti iko kwekutanga kuratidzika kwakadai, asi isu vedu vanoziva mhando iyi yezvinhu vanoziva kuti haina kudhura kana kuipa.
Weight: 250 gramu
Colors: Dema nechena
Iyo yekugadzirisa inogona kuvandudzwa, asi ine huwandu hwakawanda hweanogadzira zvinhu padanho rekupeta. Nzeve imwe neimwe inotenderera inenge 90ates yakatwasuka uye inopeta yakati sandara. Isu tine simile-yeganda yekupfeka pamusoro wepamusoro uye pamahedhifoni, iyo yakagadzikana uye inounganidza zvizere nzeve. Isu tine yekubata pane kurudyi yerabha nzeve inotibvumidza kusangana nemutambi, pamwe nemabhatani matatu (ANC - ON / OFF - AWS) pane nharembozha pachayo uye Mamiriro ezvinhu LED kune imwe neimwe rubatsiro rwekunzwa zvakare. Zvekubatana tine iyo 3,5mm jack yekurudyi uye USB-C chiteshi yaishandiswa kuchaja munzeve nhare yekuruboshwe. Zviripachena, iyo yemusoro bhanhire inowedzerwa uye ine esimbi chassis mukati.
Runyararo rwakanyanya kudzimwa kwandakamboona
Tine ruzha rwekudzima mabhatani, zvisinei, zvinokurudzirwa kwazvo kuisa iyo Kygo Sound application (Android/iOS) kuti ugone kunakidzwa nezvose zvirimo. Kanzura ruzha kuri nyore, kwakaringana uye padanho remhando dzinozivikanwa senge Sony maererano nekudzima kwakazara, asi… ko kana tichida chimwe chinhu zvakare? Zvese izvi zvakagadziriswa zvinopa runyararo kudzimiswa kweaya Kygo A11 / 800:
Runyararo kudzima ruzha: Isu tinoteerera kumimhanzi chete
Nzira yekuzivisa: Inobvisa 50% yeruzha rwakadzika uye 100% yemanzwi evanhu
Ambient modhi: Iyo inobata ruzha rwekunze uye inotibvumidza isu kuti titaure tichiteerera kumimhanzi, zvinoita sekunge kuti mumhanzi unemi uye hauna mahedhifoni.
Semuenzaniso, kufamba nezvifambiso zveveruzhinji senge yepasi pevhu, kudzima ruzha zvachose kunokusanganisa zvachose, asi hapana chakakurudzirwa kupfuura iye "Ambient mode" kudzika nemugwagwa usingatambure. Ino inguva yekutanga kuti ruzha kukanzurwa kuve rwevanhu zvakanyanya uye zvinopa zvachose izvo zvinovimbisa mune yega modhi, unozviita sei? Zvinoita kunge zvemashiripiti.
Iko kunyorera kuwedzerwa kukosha
Iyo Kygo Life A11 / 800 haina kupedzwa kana usati waisa kunyorera. Software haina kumbobvira yakakosha mune chigadzirwa chakadai, uye vanoita kunge vakadzidza zvakawanda kubva kune vamwe vavo Sonos kubva pane izvi. Iyo app ndeye yakawedzera kukosha iyo inokwidziridza iyo Kygo Life A11 / 800 kune imwe inenge yakanyanyisa poindi yemhando, mhedziso kugadzirisa uye huwandu hwamabasa iwe wausingazive iwe kuti waida kusvikira iwe waedza.
Iyo EQ system pamufananidzo inokutendera kuti ugadzirise mhando yeruzha kune zvaunofarira pasina kuita juggle nema classic EQs uye izvo zvinoongwa padanho rekureruka nekushanda. Isu zvakare tine yakapusa maitiro maitiro ekuchinja zita reedu mahedhifoni, batidza uye bvisa akasiyana maratidziro ekudzima ruzha uye tsvaga zvakadzama kuzvionera kwakasara. Kunyangwe izvi, iko kunyorera hakuna madikanwa kuti uzive, semuenzaniso, kuzvitonga, sezvo ichi chichionekwa mune yekushandisa menyu yeiyo iPhone semuenzaniso.
Kuzvimiririra, mashandiro uye hunyanzvi hunhu
Izvi Kygo Hupenyu A11 / 800 vanoenda kupfuura kurira, vanovavarira kupa chiitiko. Muenzaniso ndewekuti vane yekucherechedza system inomira uye inotangazve mimhanzi otomatiki patinoibvisa / kuiisa, hongu, kunge maAirPod. Asi zvinoenda zvakanyanya, kutanga nazvo ivo vane MAKARALI USB 5.0 kufambisa odhiyo uye chengetedza simba, sezvavakaita NFC, izvo zvinovabvumidza kuti vabatanidzwe kune zvishandiso zveApple nekungounza kurudyi munzeve kune iyo smartphone muverengi.
Madereri: 40 mm.
Kunzwisisa: 110 ± 3dB
Nguva yekupindura (± 3dB): 15 Hz - 22 KHz
enderana ine aptX, aptX LL uye AAC mafomati
Nekudaro, kuzvitonga ipfungwa yakakodzera panguva ino. Tine bhatiri re950mAh, iro rinokwanisa kupa kusvika ka18 nguva yekutamba kuburikidza neBluetooth uye nerunyararo kudzimurwa kwakaitwa, kuchititorera isu kusvika maawa makumi matatu nemasere kana tisingashandise chero chinhu kunze kwetambo (Zvinotyisa sei!). Kuvabhadharisa tinoshandisa USB-C uye zvakatitorera ingangoita maawa maviri, isiri pfupi. Nezve kuzvimiririra, hongu mahedhifoni anoita kunge asina kana dambudziko uye mune yangu ruzivo vanovhara chaizvo data remugadziri, chimwe chinhu chisingawanzo kuwanikwa mumusika uyu futi.
Chiitiko chevashandisi uye maonero emupepeti
Yakareruka uye yakasununguka dhizaini
Yakanakisa ficha-yakavakirwa ruzha kukanzurwa kwandamboona
Ivo vanomisa nekukurumidza uye vane tani yezvinhu
Zvishandiso zvinogona kunge zvisingaite zvakanakisa
Iyo yekubata bata ine imwe lag
Nyaya yakakura, pamwe bhegi raive nani
Ini ndiri mudiwa weChokwadi Wireless mahedhifoni, mushandisi akatendeka weAirPods, uye zvicharamba zvichidaro. Kunyange zvakadaro, pandinogara pakombuta kuti ndishande kana pandinoenda parwendo, aya Kygo Life A11 / 800 anotora nzvimbo yepakati. Ivo vane yakanyanyisa kusiyanisa ruzha kukanzurwa kwandakaedza kufambidzana uye vakasununguka kuva navo kwemaawa panguva. Mukati memusika we "premium" mahedhifoni mune ino chikamu (kwete chete audiophiles) ini ndinowana vashoma vanokwikwidza maererano neodhiyo mhando uye hapana maererano neuwandu hwemabasa akapedzwa zvakanaka.
Pfungwa isina kunaka Zvandinoona, kunyangwe ndichizvidzivirira polycarbonate, iko kunzwa kunoratidzwa nezvinhu uye kukodzera kwadzo. Ini ndawanawo kunonoka kudiki mumhinduro inopihwa neyemultimedia control touchpad uye masimba uye mabhatani eANC anoita kunge akarasika uye anotyisa kwandiri. Nezvayakaipira, isu tine chishandiso chiri chemhando yepamusoro, kuzvitonga kunoshamisa, yakanyanya yepamusoro odhiyo mhando uye yakanyanyisa kuita uye yakakwana ruzha kukanzura kwandakaedza kufambidzana nayo. Kana iwe wakada unogona kuzviwana kubva ku249,00 uye nezvakanakisa zvivimbiso mu IYI BHUKU. Kunyangwe iwe uchizowanawo mahedhifoni mune akasarudzika nzvimbo dzekutengesa senge El Corte Inglés.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Kygo A11 / 800, inonyanya kukanzurwa kukanzura odhiyo [Ongororo]
Arbily G9 mahedhifoni ongororo
Maitiro ekuendesa mberi otomatiki maemail